Home Wararka Dembiile sida Farmajo oo kale ah Markale Mana Hogaamin karaa?
Dowladnimada hogaagsan maaha in ummada lagu hayo mugdi, laga qariyo wax kasta oo dalkooda ka socda iyo inay waxba kal socon waxa ay dowladdoodu qabaneyso. Dowladaha iyo hogaamiyayaasha sidaan u dhaqmana waa kuwa kalitaliyayaasha ah oo caadadoodu tahay inay ku marin hababiyaan shacbiga been, cagajugleyn, waddaniyad been ah iyo hilow hannaan hore oo aan u joogsan Karin xataa hal daqiiqo oo si fiican loo dhuuxaa sida kacaankii oo maanta cid waliba ay ogtahay dhibka uu dalkaan gaarsiiyey.
Farmajo weli waxaa ku adag inuu dadka u sheego inuu Tartarmayo 2021 iyo in kale, inkastoo ay ihaano tahay inuu mar kale ruux sidaas ah uu isu taago ummadda hogaankeeda taas oo ah:
Inuusan marnaba u naxayn umadda uu dhibaatada hogaaxumo, aqoondaarida qofnimo iyo daneysiga mutuxan ee mar waliba ka horimanaya waddaniyadda uu sheegto mar kale rabo inuu ku sii fogeeyo godkii uu ku riday.
Waxay ihaano ku tahay Umadda Somaliyeed oo ay caay iyo ceeb ku tahay inuu qof noocaan ah uu hogaamiye u yahay, kaas ka arradan wax kasta oo qof caqli leh lagu yaqaanno, tusaalana kuugu filan dhacdooyinka yar oo soo qqadya; gaariga sharafeed lagu geynayey goobaha xaflad caalamiga ay ka dhacaysay oo uu ka boodo dhinac khalad aqoonta iyo habmaamuusxumo darted sida ka dhacday K/Afrika, Talyaaniga oo aad ula yaabay nacasnimada hogaamiyaha na matalaya oo musqulaha iyo luuqyada ku ordaya iyadoo waliba la hagayo, jilbaha iyo caloosha oo ay ka salaaxayaan afawerki iyo Abiy intey dhexda gashadaan iyo waxyaabo badan oo ka sii daran oo aan soo bandhigi doonno marka ay baaristooda noo sugnaato si annaan dembi uga galin isaga, shacbigana aan been ugu sheegin.
Waxaa kaloo ay caloolxumo ku tahay Tirada dadka wax ku noqoday hogaankiisa oo tira beel ah, taas oo keeni doonta in la maxkamadeeyo ama dadka hogaankiisa lagu waxyeelleeyey oo ay ka dhamaato cabsida iyo sugiida kadibna gacantooda uga aarsada.
Waxay dhirbaaxo xanuun badan ku tahay Ilmaha aabayaashood laga dhilay, aabbe ama walaal qofkiisa ay ka mid yihiin dadka ay waxyeelada ka soo gaareen talada xumada Farmajo sida dhaliinyarada Eratariya rahaamadda loogu haysto qaarna Itoobiya laga iibsaday si xaabo looga dhigto oo hadda sugaya inta uu xafiiska ka tagayo Farmajo si ay maxkamad ula tiigsadaan ayaa dhici karta inay gacantooda sharciga ku qaataan marka ay arkaan in isaga iyo kooxdiisa (Fahad iyo Kheyr)dhibka geysatay ay talada dalka ku soo noqdaan.
Farmajo ma sii wadi karo xaaladda is qarinta ah ee ah qaabka ay shiicada u dhaqanto oo ah inay is qariyaan muddo dheer, waa inuu hor yimaadaa shacbiga una sheegaa inuusan ahayn murashax dalkana uu isaga cararaa maadaama uu ogyahay inay u yaalllan eedo badan oo isugu jira kuwa qaran iyo kuwa uu shakhsiyaad ka galay. Xataa hadda oo uusan haysan wax sharciyad waxaa uu saxeexayaa heshiiyo lala galayo dalal sida Itoobiya sida:
Heshiiska la sheegay ina lala galay Itbooiya ee Daroogo ku badalasho Kalluun, kano o ah marki ugu horreysay ee ay dowlad Somaliyeed sharciyeyso in daroogo dalka si sharci ah loo keeni karo, sababtoo ah waxaa saami weyn ku leh reer Farmajo oo dhan iyo Marwada koowaad waxaana hawsha wada Xasan Cabdullahi Farmajo oo ay walaalo yihiin Maxamed Cabdullahi Farmajo.
Heshiiskii iibinta dekadaha Somaliya oo isagana hadda la rabo in Itoobiya ay ka diiwaangeliso keydka caalamiga ah ee heshiisyada u dhaxeeya waddamada si caalamka uu u ilaaliyo ugu cadaadiyo dalkii isku daya inuu jebiyo.
Heshiiska Saxeexa Xaraashka Shidaalka oo hadda gabagabo ah, kaas oo uu wado Cabdirashiid Sheekhaalow si looga helo lacag boodjebis ah oo doorashada lagu galo.
Isku soo duub, afartii sano ee Farmajo waxay taariikhdu qori doontaan dad badan oo ka qeyb qaatay hagardaamada dalka loo geystay waxaana iman doonta maalin lau xisaabtamo oo lagu faquuqo xataa taageerayaasha u sacbiya Farmajo, inksatoo kuwa badan ay hadda ka dagayaan tareenkiisa. Welina waxaa uu u muuqdaa mid aan ka waabaneyn khiyaano qaran oo wuxuu saxeexay intaas oo xeer Madaxweyne oo dhamaantood taariikhda loo dib loo celiyey si shacbiga iyo dad kale loogu khaldo inuu saxeexay intii aysan muddo xileedka ka dhammaan.